Sony VPL-FX37 Projector (White) ~ ICT.com.mm
HomeSony VPL-FX37 Projector (White)
Sony VPL-FX37 Projector (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Lumen 6000, XGA resolution (1024 x 768), Lamp Life 3500 Hours, Screen Size: 40″ to 600″ (measured diagonally) (1.02m to 15.24m), Contrast ratio 2000:1, Aspect ratio 4:3, 2VGA, DVI,... [Learn more]
Brand: SONYFilter by: Projectors, TMW, USD
Lumen 6000, XGA resolution (1024 x 768), Lamp Life 3500 Hours,
Screen Size: 40″ to 600″ (measured diagonally) (1.02m to 15.24m),
Contrast ratio 2000:1,
Aspect ratio 4:3, 2VGA, DVI, S-video in, Video in, RJ-45,
Mdl: VPL-FX37, Sony projector 1 year warranty Lamp
အလင်းအား 6000 lumens နှင့် 2000:1 contrast ratio ရှိသည့် sony အမှတ်တံဆိပ် Projector ဖြစ်သည်။ , ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များအတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး အလင်းရောင်ရှိသည့် အခန်းတွင်းပင် Resolution 1024 x 768 ရှိ ပုံရိပ်များကို 600 “(15.2 m) ရှိ screen များအပေါ်တွင် တောက်ပစွာမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ VPL-FX37 တွင် DVI-D, S-video တို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အပြင် ပြင်ပ Speakers များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မည့် audio line-out ပါဝင်သည်။ အခြားသော Display Devices များအတွက် monitor output လည်း ပါဝင်သည်။ RJ-45 (Ethernet) jack ပါဝင်သည့်အတွက် အဆောက်အဦးအတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် Local Network (LAN) သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ . Network အတွင်းရှိ မည်သည့်ကွန်ပြူတာမှမဆို Presentation ပြုလုပ်နိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်စေခိုင်းမှု များကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေရာမျိုးစုံရှိ VPL-FX37s Projectors များသို့ အချက်အလက်များ တပြိုင်နက် ပေးပို့နိုင်ပြီး အပူချိန်၊ မီးလုံးပျက်စီးမှုနှင့် အခြားထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေး ပြဿနာများကို Projectors များမှလည်း Email ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
The Sony VPL-FX37 XGA Installation Projector isaworkhorse to say the least. With 6000 lumens of brightness anda2000:1 contrast ratio, it's safe to add powerful to its list of attributes. This is the projector you want for large venues and permanent installations to project 1024 x 768 images on screens up 600" (15.2 m) with or without ambient light.VPL-FX37's wide connectivity includes DVI-D, S-video, and composite as well asavariable audio line-out to balance external speaker levels, as well asamonitor output for an auxiliary display. The VPL-FX37 is equipped to use your local network (LAN) thanks to its RJ-45 (Ethernet) jack. You can make presentations from any PC on your network as well as managing, monitoring and controlling it remotely. You can also send important announcements like scheduling information to several VPL-FX37s in multiple locations. They, in turn can email you individual status data detailing conditions like excessively high temperature, imminent lamp burn-out and other maintenance issues.